Cabsi laga muujiyay in shaqsiyaadka qaar logu daro wasiirada cusub ee Soomaaliya + Magacyadooda. - Caasimada Online
Home Warar Cabsi laga muujiyay in shaqsiyaadka qaar logu daro wasiirada cusub ee Soomaaliya...
Cabsi laga muujiyay in shaqsiyaadka qaar logu daro wasiirada cusub ee Soomaaliya + Magacyadooda.
Shacabka Soomaaliyeed ee u dhaqan magaalada Muqdsho ayaa ka ficil celiyay warar magaalada soo galay oo ku saabsan magacaabista golaha wasiirada cusub ee Dowladda federaalka Somalia.
Waxaa shalay iyo maanta magaalada hareeyay war ku saabsan in qaar ka mid ah xubno horey xilal wasiir usoo qabtay laga yaabo in lagu soo daro golaha wasiirada cusub, haddiiba Ra’iisul Wasaare Saacid uu ansixin ka helo Baarlamanka.
Waxa ay si gaar ah walaac uga muujiyeen in lasoo magacabo wasiiro lagu bartay waxqabad la’aan iyo musuq maasuq.
“Annagu uma maleyneyno in ra’iisul wasaarahu soo magacaabi doono wasiiro horey xilal usoo qabtay, balse waa wax aan magaalada ka maqlnay, waxaana ka codsaneynaa inuusan sidaas sameyn haddiiba ay jirto” ayuu Aabe Xasan Axmed oo ka mid ah dadweynaha Muqdisho, gaar ahaan kuwa degan degmada Hodan.
Shaqsiyaadka sida aadka ah ay dadka uga cabsi qabaan oo aysan dooneyn in mar kale arkaan ayaa waxaa ka mid ah:- Shariif Xasan Sheikh Adan, Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur, Cabdirisaaq Jirille, Salaad Cali Jeelle,, Abdirahmaan Ibbi, Ismaaciil Buubaa, Maxmaed Ibraahim Xaabsadae, Maxamed Cabdi Gaandi, Maxamed Cabdullaahi Omaar iyo kuwa kale.
Waxa ay sidoo kale shacabka ugu baaqeen ra’iisul wasaare Saacid inuu wasiirada ka dhigo kuwa kooban, balse tayo leh.